Jawaari “Waxa Baydhabo ka socdo maaha doorasho xor iyo xalaal ah” | Dhacdo
Jawaari “Waxa Baydhabo ka socdo maaha doorasho xor iyo xalaal ah”
Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Gudoomiyihii hore Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya ayaa ka hadlay is hortaagga uu Maamulka Koonfur Galbeed ku sameeyay in uu isu soo sharaxo kursiga uu tirsigiisu yahay #HOP103, oo beeshiisu ay leedahay.
Gudoomiyihii hore ee Golaha Shacabka oo maalmahaanba Magaalada Baydhabo u joogay in la siiyo shahaadada musharaxnimada ee xubinimadiisa Golaha Shacabka ayaa Arbacadii loo diiday, taasoo siyaasiyiin badan ka careysiisay.
“Ayaamahan waxaan ku sugnaa Magaalada Baydhabo oo waxaan u joognay doorashooyinkii la cayimay ee dadbanaa, kursiga 103 ayaan u tartamaynay, hase yeeshee xoogaa caqabado iyo culeysyo ayaa naga horyimid.” Ayuu Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ku sheegay shir jaraa’id oo uu Magaalada Baydhabo ku qabtay, ka hor intii aanu maanta dib ugu soo laaban Magaalada Muqdisho.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa yiri “Marka aan si guud uga hadlo arrimaha meeshaan ka socdo ee Baydhabo, anigu shakhsisan qiyaasta aan qiyaasay waxay tahay meeshaan ma fidsana gogol nin gob ah oo wax ka soo doontay iyo oday, waxaa socdo arrimo takri-fal caadi ah.”
Waxa uu sheegay in waxa ka socdo Magaalada Baydhabo ay liddi ku yihiin dastuurka qaranka, isagoona yiri “Qawaaniinta noo degsan oo dastuurka uu dhigayo waxaa weeye in la qabto doorasho hufan, xor iyo xalaal ah in la qabto ayaa ku qoran, taas ayaa laga soo minguuriyay dastuurka in la qabto doorashada dadban.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri “Hadda meeshaan wax hufan iyo xalaal ah kama jiro, iskaba dhaafee waxaa weeye si daahfuran waxaa loo sameynayaa gabood-falo caadi ah, oo lagu talax tegaayo xuquuqda muwaadinka ee xaqiisa siyaasiga, oo ah in la doorto iyo inuu wax doorto waa laga horyimid. Wax nidaam dowladeed la yiraahdo oo meeshaan yaala ama xaq wax lagu qaybinayo uma jeedo.”
Prof. Jawaari ayaa ka digay waddada hadda la hayo inay dalka dib ugu celiso xaaladdii adkeyd ee horaan laga soo gudbay.
“Haddii sidaan lagu socdo waxaan ka baqayaa dowladnimada intii yareyd ee soo kasbanay inay faraha ka baxdo ayaa suurtagala.” Ayuu yiri Jawaari oo intaasi ku daray “Meesha-tan uma jeedo sidii loogu talagalay warqadaha ku qoran oo la rabay in loo fuliyo doorashooyinka, uma jeedo. Meel waxay ku jiraan kontorool aad u adag oo gacan qof ku jirto, qof aan raali laga ahayna meeshaasi ma gudbaayo oo maba noqonayo musharax.”
Jawaari ayaa raaciyay “Waxaa hadda wada hadal u socdaa oo wixii ka soo baxo aan sugaynaa go’aankooda Madaxda Koonfur Galbeed iyo odayaasha beeshii iska laheyd kursiga 103, inay ka xaajoodaan, go’aana ay ka gaaraan. Aniga illaa iyo hadda rasmi ahaan waxaan ahay musharax rasmi ah oo kursigaas 103 u sharaxan, sugayana doorasho xor, xalaal iyo daahfuran in la qabto ayaan diyaar u ahay, illaa taas laga gaarayana sidaasaa u soo taagnahay. Kursiga waxa bixin kara ama diidi kara waa beesha iska leh.”